‘डेटिङ’ का लागि बनाएको युट्युब कसरी बन्यो अनलाइन भिडिओको राजा ? — Paschimnews.com News From Nepal
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७६/११/८ गते
के तपाईंलाई थाहा छ, हामी सबैजसोले भिडिओ हेर्ने मुख्य थलो युट्युब कहिले सुरू भएको हो? जम्मा १५ वर्षअघि।
यी १५ वर्षमा युट्युबले यस्तो फड्को मारेको छ, यो अहिले अनलाइन भिडिओको ‘राजा’ कहलिन्छ।
अमेरिकी कम्पनी युट्युबका प्रतिमहिना दुई अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन्। हरेक दिन यहाँ मान्छेका लाखौं घन्टा बित्छन्। गीत-फिल्म हेर्नदेखि सीप सिक्नसम्म युट्युब चहार्नेहरू कति छन् कति।
युट्युबले आफूसँगै धेरै प्रयोगकर्ताको जीवन पनि उकासेको छ। युट्युबलाई आफ्नो कर्मथलो मान्नेहरूले यसबाट धेरै फाइदा लिइरहेका छन्।
तर धेरैलाई युट्युबको इतिहासबारे थाहा छैन।
यो कम्पनी सन् २००५ मा स्थापना भएको हो। सुरूआती केही महिना अलमल भए पनि पछि यसको उडान रकेटझैं तीव्र थियो। एक वर्षपछि यसलाई गुगलले किन्यो। गुगलको छत्रछायामा हुर्किँदै युट्युब कलाकार, सेलेब्रेटीदेखि सिकारू र सामान्य मान्छेका लागि आफ्ना ब्रान्ड प्रचार गर्ने थलो बन्यो।
सन् २००५ फेब्रुअरी महिनामा तीन जना- चाड हर्ली, स्टिभ चेन र जड करिमले यो कम्पनी सुरू गरेका थिए। उनीहरू तीनै जना भर्खर सुरू भएको इ-पेमेन्ट कम्पनी ‘पेपाल’ मा काम गर्थे। उनीहरूले आफ्नै काम सुरू गर्ने उद्देश्यले बिना पैसा भिडिओ सेयर गर्न मिल्ने साइट खोले, जसलाई ‘युट्युब’ नाम दिए।
संस्थापकमध्ये हर्लीले भ्यालेन्टाइन्स डे (फेब्रुअरी १४) का दिन क्यालिफोर्नियास्थित युट्युबको पहिलो प्रधान कार्यालयमा बसेर ट्रेडमार्क, लोगो र डोमेन दर्ता गरे। हर्ली नै युट्युबका पहिलो सिइओ पनि भए।
युट्युबका संस्थापकहरू बायाँबाट- स्टिभ चेन, चाड हर्ली र जड करिम। तस्बिरः बिजनेस इनसाइडर
उनीहरूले सुरूमा युट्युबलाई नयाँ प्रकृतिको ‘डेटिङ साइट’ का रूपमा ल्याउने सोचेका थिए। यसनिम्ति ट्यागलाइन पनि बनाए- ट्युन इन, हुक अप। यसका लागि उनीहरूले महिलाहरूलाई ‘डेटिङ भिडिओ’ राखेबापत् २० डलर दिने विज्ञापन राखेका थिए।
डेटिङ साइटका रूपमा युट्युबले धेरै प्रयोगकर्ता आकर्षित गर्न सकेन। संस्थापकले उक्त विज्ञापन हटाए।
‘हाम्रा प्रयोगकर्ताहरू हामीभन्दा एक कदम अगाडि रहेछन्,’ संस्थापकमध्ये जड करिमले पछि भनेका थिए, ‘उनीहरूले युट्युबमा सबै किसिमका भिडिओ हाल्न थाले।’
सन् २००५ अप्रिलसम्म आइपुग्दा ‘डेटिङ साइट’ का रूपमा आएको युट्युबले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य छाडिसकेको थियो। त्यसपछि तीन संस्थापकले युट्युबलाई खुला भिडिओ सेयर गर्न मिल्ने प्लेटफर्म बनाए।
यसलाई नयाँ तरिकामा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले अपलोड गरिएको पहिलो भिडिओ ‘मि एट द जू’ थियो। १९ सेकेन्डको यो भिडिओमा संस्थापक जड करिम आफैं देखिएका थिए। उनी सान डियागो चिडियाघरमा हात्ती अगाडि उभिएर सुँडबारे कुरा गरिरहेका हुन्छन्।
एक महिनापछि युट्युबले आफ्नो बेटासाइट सार्वजनिक गर्‍यो। यसमा पहिलेभन्दा डिजाइन अलिकति फेरिएको थियो। थाहा पाइराखौं, अहिले देखिने युट्युबको डिजाइन सन् २०१९ नोभेम्बरमा परिवर्तन गरेर बनाइएको हो।
२००५ सेप्टेम्बरमा युट्युबको एउटा भिडिओले पहिलोपटक १० लाख भ्युज पायो। उक्त भिडिओ नाइक कम्पनीको विज्ञापन थियो, जसमा ब्राजिलियन फुटबलर रोनाल्डिन्होले ‘गोल्डेन बुट्स’ लिँदै गरेको दृश्य छ। यो भिडिओ भाइरल भएसँगै व्यावसायिक प्रचारनिम्ति युट्युब शक्तिशाली ठाउँ हुनसक्ने सम्भाव्यताको ढोका खुल्यो।
डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा युट्युबले दैनिक ८० लाख भ्युज पाउन थालिसकेको थियो। यही बेला उसले आफूलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो। सँगै सिकोआ क्यापिटलबाट लगानी पनि पायो।
स्थापनाको एक वर्ष हुँदै गर्दा युट्युबमा ‘लेजी सन्डे’ भिडिओले लाखौं भ्युज पायो। यसमा समाचार संस्था एनबिसीले प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनको आरोप लगायो र भिडिओ निकाल्न भन्यो।
यो घटना पछि २००७ अक्टोबरमा युट्युबले प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्न ‘कन्टेन्ट भेरिफिकेसन’ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो।
२००६ अप्रिलमा दुई चिनियाँ युवाले ‘ब्याकस्ट्रिट ब्वाइज’ को गीत गाउँदै गरेको भिडिओ युट्युबमा आयो। यो भिडिओले नै गुगललाई युट्युब किन्न प्रेरित गरेको कम्पनीकी वर्तमान सिइओ सुसन वोजकिकी बताउँछिन्। त्यो बेला सुसन युट्युबमा लगानी गर्न गुगलसँग सहजीकरणको काम गरिरहेकी थिइन्।
युट्युबकी सिइओ सुसन वोजकिकी। तस्बिरः बिजनेस इनसाइडर
त्यही बेला युट्युबमा पहिल्यै लगानी गरेको सिकोआ क्यापिटल र आर्टिस क्यापिटल म्यानेजमेन्टले यसमा एक करोड डलरभन्दा बढी लगानी गरे। केही महिनापछि युट्युबलाई गुगलले किन्दा यी दुई कम्पनीलाई धेरै रकम दिइएको बताइन्छ।
जुन महिनामा युट्युबले एनबिसीको टिभी च्यानल प्रचारका लागि सम्झौता गर्‍यो। यसले पुरानो शैलीमा चलिरहेका च्यानललाई नयाँ डिजिटल युगमा फड्को मार्न सघायो।
अक्टोबरमा सुसन आफ्नो काममा सफल भइन्। गुगलले तत्कालीन समय ६५ जना कर्मचारी भएको युट्युब १ अर्ब ६५ करोड डलरमा किन्यो। युट्युब संस्थापकहरू प्रत्येकले यो बिक्रीबाट ४०-४० करोड डलर फाइदा लिन सके।
सन् २००७ मेमा चार्ली नामका बच्चाको भिडिओले विश्व हल्लायो। ५६ सेकेन्डको उक्त भिडिओमा ती बच्चा आफ्ना दाजुका औंला टोक्दै-हाँस्दै गरेका देखिन्छन्। यो भिडिओ तीव्र गतिमा भाइरल भयो। अहिले यसमा करिब ९० करोड भ्युज छ।
सन् २०१७ मा भिडिओको दसौं वार्षिकोत्सव मनाउँदै ती बच्चाका परिवारले भिडिओबाट रोयल्टी स्वरूप १० लाख पाउन्डभन्दा बढी पाएको बताएका थिए।
२००७ जुनमा एप्पल कम्पनीले आफ्नो पहिलो आइफोन मोडल र युट्युबले मोबाइल साइट सार्वजनिक गर्‍यो। युट्युब संस्थापक चड हर्लीले यसमा मोबाइलको ठूलो बजार हुने अनुमान गरेका थिए। त्यसै वर्ष जुलाइमा युट्युबले २००८ मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको गतिविधि समेट्यो। त्यो बेला राष्ट्रपतिका १६ जना उम्मेदवारले युट्युबमार्फत् चुनावी अभियान चलाए।
२००८ सेप्टेम्बरमा जुडसन लाइप्लीको ‘इभोलुसन अफ डान्स’ दस करोड भ्युज पाउने पहिलो भिडिओ बन्यो। यो भिडिओपछि जुडसन निकै चर्चित भए, जो पछि ‘मोटिभेसनल स्पिकर’ बने। त्यसपछि क्रमशः युट्युबले विभिन्न खाले विज्ञापन योजना ल्याउँदै गयो।
अप्रिल २००९ मा १५ वर्षे जस्टिन बिबर युट्युबमा देखा परे। लगत्तै अर्को वर्ष उनको ‘बेबी’ भिडिओ आयो, जुन अहिलेसम्मकै धेरै डिसलाइक पाउने भिडिओ हो। यो बेला युट्युबमा एक मिनेटमै २० घन्टाभन्दा बढीका भिडिओ अपलोड भइरहेका थिए।
सन् २०१० अक्टोबरमा संस्थापक चड हर्लीले सिइओ पद छाडे र गुगलले सलार कमांगारलाई नयाँ सिइओ बनायो। कमांगार दुई वर्षदेखि नै गुगलको मुख्य पदमा रहेर काम गरिरहेका थिए।
त्यसपछि युट्युबमा क्रमशः नयाँ-नयाँ कार्यक्रम र फिचर आउन थाले। सन् २०१२ मा कोरियाली गायक पिइएसवाइको ‘गङनम स्टाइल’ एक अर्ब भ्युज पाउने पहिलो भिडिओ बन्यो। यो भिडिओले युट्युबमा करिब पाँच वर्ष नम्बर एक स्थान बनाएको थियो र हाल भ्युजका हिसाबमा सातौं नम्बरमा छ। पहिलो नम्बरमा भने सन् २०१७ मा आएको ‘डेस्पासितो’ छ जसको भ्युज ६ अर्ब ६४ करोड हाराहारी पुगिसकेको छ।
सन् २०१३ मार्चसम्म युट्युबले मासिक एक अर्ब प्रयोगकर्ता पाइसकेको थियो। स्थापनाको नवौं वर्ष पुग्दा कम्पनीको सिइओ सुसन वोजकिकी भएकी हुन्।
अहिले मासिक दुई अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको युट्युब पन्ध्र अर्ब डलरभन्दा धेरैको कम्पनी भएको अनुमान छ।